माधव नेपाल फकाउन ओलीकाे सक्रियता – Lokpati.com
प्रचण्ड चितवन पक्राउ केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेस सरकार अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी नेकपा अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड मृत्यु राशिफल प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १५ असार। वालुवाटर नगएपछि नेकपाका नेता माधव नेपाल फकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दूत सक्रिय बनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबारे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चालु स्थायी कमिटी बैठकमै आपत्ति जनाएपछि वालुवाटार अहिले उनलाई फकाउने रणनीतिमा लागेको हो।
आफ्नै कार्यशैलीका कारण अहिले अप्ठयारोमा परेपछि केपी शर्मा ओली अहिले नेपाललाई कसरी फकाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छन्। उनको सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रियासँग पार्टीकै नेता सन्तुष्ट छैनन्। तर उनी पार्टीभित्रको अप्ठयारो छल्न र नेता फकाउने अभियानमा लागेकै कारण ओली माधव नेपाललाई छुटटै भेटघाटका लागि वालुवाटार बोलाएका थिए।
आफू अप्ठ्यरोमा परेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रयोग गर्ने गरेको भएपनि अहिले भने नेपाललाई फकाउन वालुवाटार बोलाएका थिए। तर नेपाल वालुवाटार नगएपछि नेपाललाई भेट्न ओलीका दूत विष्णु रिमाल आफै कोटेश्वर पुगेका थिए। तर यो पटक उनलाई यो कार्डले पनि थेग्न नसक्ने देखेपछि कुर्सी कसरी बचाउने भन्नेमा अनेक फन्डा शुरु गरेका छन्। त्यही क्रममा उनले आफुलाई हटाउन भारत सक्रिय रहेको र नेपालका नेताहरु पनि त्यसमा सामेल भएको टिप्पणी गरेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बालुवाटार वोलाएर छलफल गर्न चाहेका थिए। उनले पार्टीका विषयमा छलफल गर्नुपरयो, बालुवाटार आउनुहोस्, माधव नेपाललाई टोलिफोनमा कुरा गरेका थिए।
तर नेपालले ओलीलाई पार्टीमा छलफल चलिरहेको, बैठक बसिरहेको र त्यही बैठकमै सबै कुरा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए। दुई दिन यता आफ्नो आलोचना हुने ठानी प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक छलिरहेका छन्।बुधबार स्थायी समिति बैठक शुरु भएपछि एक दिन स्थगित भएको बेला बिहिबार ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। अब सिधा लेनदेनमा प्रवेश गरौ, लौ भन्नुहोस् तपाई कँहाबाट चुनाव लडने ? कहिले गराऔं चुनाव ? ल तपाई संसदमा आउनुपरयो ? प्रधानमन्त्रीले गौतमसँग भनेका थिए, संसदमा ल्याउन म तपाईलाई सहयोग गर्छु, तपाईले पार्टीको अप्ठयारोमा मलाई सहयोग गर्नुपर्यो। तर गौतमले आफूलाई संसदमा लैजाने नलैजाने विषय पार्टीको जारी बैठकमै लिएर जानुहोस्, जाने नजाने मेरो इच्छा। तर अब म त्यसरी जान्न।
मलाई सधै प्रयोग गर्ने सोच नराख्नुहोस, म पार्टीमा आफनो कुरा लिखित नै राख्छु, अरु त्यही छलफल गरौंला। गौतमले साथ नदिने देखेपछि ओली शुक्रबारको बैठकमै सहभागी चएनन्। शनिबार पनि बालुवाटारभित्रकै बैठकमा ओली अनुपस्थित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि मुख देखाउनका लागि मात्रै बैठक हलमा प्रवेश गरे र लगत्तै बाहिरिएका थिए। आफ्नो आलोचना हुने देखेपछि ओली नेकपाको पार्टी बैठकमा बस्न सकिरहेका छैनन्। तर जुन हलमा नेकपाको बैठक बसेको थियो, त्यही हलबाट उनले हिजो भने आफुलाई लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेर संविधानमा समेटेकै आधारमा भारतले हटाउन सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाएका थिए।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, ओलीले गौतमलाई फकाउने प्रयास असफल भएपछि आइतबार बिहान वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गर्न चाहेका थिए। तर नेपालले प्रधानमन्त्रीले बोलाउदा समेत वालुवाटार गएनन्। त्यसपछि उनले आफ्ना प्रमूख सल्लाहकार तथा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमाललाई नेता नेपालसँग कुरा गर्न कोटेश्वर निवास पठाए। रिमाल बिहान कोटेश्वर पुगेर नेता नेपालसँग कुराकानी गरे। पार्टीमा अहिले मिलेर जानुको विकल्प नभएको, केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म आफुले नेपालकै आग्रहका आधारमा हेरफेर गर्न तयार रहेको, पार्टीको महाधिवशेनपछि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको जस्ता प्रस्ताव लिएर रिमाल नेपाल भेट्न पुगेका थिए। तर नेपालले पार्टीमै छलफल भएकोले यसमा अब आफूले केही बताउन नसक्ने र जे निर्णय गर्छ अब पार्टीले नै गर्छ भन्दै जवाफ फर्काइ दिएका थिए। संकल्प खबरबाट
नेपालमा थप ४७६ जनामा कोरोना पुष्टि